7 Dariiqo oo Loogu Dammaanad Qaadayo Websaydh Xarun Macaamiil | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 15, 2015 Denyse Drummond-Dunn
Waxaan dhawaan dib u eegay qaar ka mid ah shirkadaha CPG / FMCG ee websaydhyada iyo waxa naxdin igu dhacay! Kuwani waa ururo macaamil ku leh magacooda saxda ah markaa waa inay noqdaan kuwa ugu macaamiisha badan, sax? Haa haa dabcan!
Haddana in yar oo ka mid ahi waxay umuuqdaan inay qaataan aragtida macaamilka markay abuurayaan degelladooda internetka. Xitaa in yar oo ku filan ayaa ku faraxsan inay iga dhigto inaan doonayo inaan ku laabto degelkooda, ugu yaraan waqti kasta ugu dhakhsaha badan!
Dib-u-eegiddayda degmooyin dhowr ah, waxay umuuqataa in ururada badankood ay dhisaan degelladooda internetka si ay ula wadaagaan waxyaabaha macaamiishooda. Si kastaba ha noqotee, waa macluumaadka waxay doonayaan inay wadaagaan, maahan waxa ay macaamiishooda jeclaan karaan inay helaan.
Tani waxay iga dhigtay inaan ka fekero waxa muhiimka noqon lahaa, marka laga eego aragtida macmiilka, in lagu daro websaydh. Waa tan liistadayda toddobada waxyaalood, laakiin waxaan soo dhaweynayaa fikradahaaga ama ku darista faallooyinka hoose.
7da Waxyaabaha WAA IN AY KU JIRAAN Website
Qaab dhismeed cad oo ah moodaa. Waa inaad wali kudarsataa khariidad mareegaha kuwa ubaahan caawinaad dheeri ah ama kuwa caqligoodu ku yaryahay raadintooda.
Si fudud loo helo xiriiriyeyaasha xiriirka, ama faahfaahinta shirkadda oo buuxa bogga guriga. Kuwani waa inay ku jiraan lambarrada taleefannada, emaylka, cinwaannada boostada iyo waddooyinka, iyo astaamaha warbaahinta bulshada. Waa inaad maskaxda ku haysaa in maalmahan, macaamiisha inta badan ay aadaan degel si ay u ogaadaan sida loola xiriiro nooc ama shirkad. Sidaa darteed ugu fududee sida ugu macquulsan iyaga.
Liiska magacyadaada, wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada. Maaddaama macaamiisha ay ka fikiraan noocyada ka hor qaybaha, ku dar sawirradooda, oo ay weheliyaan faahfaahinta la xidhiidha sida waxyaabaha ku jira xirmooyinka iyo maaddooyinka. Ku dar talooyinka isticmaalka, gaar ahaan haddii ay jiraan wax xaddidaad ah, iyo macluumaad ku saabsan halka laga helayo, gaar ahaan haddii qaybinta la xadiday. Kuwani waa xaqiiqooyinka ugu yar ee lagu dari karo, laakiin dabcan waxaad ku dari kartaa faahfaahin dheeraad ah oo aad ogtahay inay xiise u leedahay oo ay muhiim u tahay macaamiishaadu inay ogaadaan.
Qeyb ku saabsan faahfaahinta shirkadda, oo ay ku jiraan kooxdeeda maareynta - maahan (kaliya) agaasimayaasha aan fulinta ahayn. Haddii aad tahay shirkad caalami ah, ku dar meelaha juqraafiyeed ee aad daboosho oo ku soo bandhig xulashada luqadaha bogga hore. Bayaanka howlgalka shirkadda, qiimayaasheeda, istiraatiijiyadeeda iyo dhaqankeeda ayaa sidoo kale muhiim ah in lala wadaago oo laga caawiyo dhisidda muuqaal wanaagsan macaamiisha. In kasta oo ay tahay inaad leedahay qayb warbaahineed oo loogu talagalay saxafiyiinta iyo maalgashadayaasha, macaamiisha sidoo kale waxay jecel yihiin inay ogaadaan waxa ku dhacaya astaamaha ay jecel yihiin, markaa ku dar qaybta wararka oo ay la socdaan sheekooyinka ugu dambeeyay.
Mawduuc qiimo leh marka laga eego aragtida macaamiisha. Goobta waa in si joogto ah loo cusbooneysiiyaa oo ay iswaafajisaa iskudhaf-biraawsar sawirrada websaydhka ku habboon. Maaddaama sawirrada iyo fiidiyowyadu ay yihiin mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee websaydhka, ku dar iyaga ama ku martiqaad macaamiishaada inay ku daraan mid iyaga u gaar ah.
Purina waxay noqotay degel sifiican loojecelyahay iyada oo ay ugu mahadcelineyso waxyaabaha ay soo saarto isticmaaleheeda, oo ay waliba kudareyso TVC-keedii ugu dambeeyay iyo xayeysiinta daabacaadda. Dadku waxay jecel yihiin daawashada, ka faallaynta iyo wadaagida waxyaabaha cusub, markaa u fududee iyaga inay sameeyaan oo ay ka codsadaan inay si joogto ah ugu noqdaan wararka ugu dambeeyay.
Qeyb Su'aalaha la Weydiiyo oo inta badan la isweydiiyo. Aaggan sidoo kale wuxuu u baahan yahay in si joogto ah loogu cusbooneysiiyo su'aalaha soo galaya khadadka daryeelka iyo kooxda adeegga macaamiisha.
Adeegyada sida raadinta, diiwaangelinta iyo diiwaangelinta foomamka, iyo quudinta RSS ee macaamiishaada ayaa mudan in lagu daro, si looga caawiyo inay sida ugu wanaagsan uga faa'iideystaan ​​boggaaga. Intaas waxaa sii dheer, raad raaca iyo xeerarka gorfeynta ayaa awood kuu siinaya inaad raacdo meesha iyo waxa ay macaamiishaadu fiiriyaan inta badan. Tani waxay ku siin doontaa macluumaad ka badan tan la helay adoo toos u weydiinaya macaamiishaada, qeybaha u baahan dib-u-eegista ama beddelka.
Tusaale wanaagsan oo loogu talagalay waxyi
Mid ka mid ah websaydhada shirkadaha ugu fiican ee aan la kulmay oo waliba baashaal badan oo la falgal ah, ayaa ah goobta Reckitt benckiser. Runtii way xiiso galisay waxayna igu mashquulisay in muddo ah iyo meelo badan oo kala duwan. Tusaale ahaan, halkii laga heli lahaa liiska caadiga ah ee noocyadeeda iyo astaamahooda, waxay muujineysaa waxa ay ugu yeeraan Awoodda safka lagu soo bandhigay shelf tafaariiqda ah ama qolalka guryaha bilicsanaanta (Waan qirayaa in dhawaaqa dhawaaqa uu xoogaa iga careysiiyay, laakiin waad iska celin kartaa). Kadib waxaad riixi kartaa sawirka sheyga si aad uga hesho macluumaad dheeri ah, qaybta iyo xayaysiiskeedii ugu dambeeyay.
Martiqaadka kaqeybgalayaasha dhagaystayaasha waxay dadka ku dhiirrigelisaa inay gujiyaan dhammaan noocyada si aad wax badan uga ogaato. Iyo bandhigyada is-dhexgalka ah ee Reckitt Benckiser ee adduunka shirkadaha, iyada oo lagu darayo cayaaraha iyo caqabadaha, waxay ku darayaan rafcaan dheeri ah, ma aha oo kaliya macaamiisha, laakiin sidoo kale kuwii hore, kuwa hadda iyo kuwa mustaqbalka.
U fiirso boggooda ku xiran korka oo isbarbar dhig websaydhka shirkaddaada. Keebaad jeclaan lahayd inaad waqti ku qaadatid? Goobtaadu ma tahay shirkad ama mid macaamiil ku dhisan? Ma haysataa dhammaan toddobada shay ee kor lagu soo sheegay boggaaga adigu? Haddii kale, waa waqtigii laga fakari lahaa macaamiil marka hore.
Denyse wuxuu leeyahay khibrad 30 sano ka badan doorka fulinta ee Nestle, Gillette iyo Philip Morris International. Waxay aasaastay oo ay tahay Madaxweynaha C³Centricity, oo ah la talin caalami ah oo siisa la-talin istiraatiiji ah kooxaha fulinta ee noocyada bilyan-doolar. Buuggeedii ugu dambeeyay ee ku guuleysta Xarumaha Macaamiisha ayaa hadda la heli karaa.